Developing Emotional Intelligence - PAÑÑĀ Online School
Emotional Intelligence ဆိုတာ ခုနောက်ပိုင်းမှာ လူပြောများတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိမြင်မှု၊ စိတ်ခံစားမှု စတဲ့ အကြောင်းအရာ soft skill တွေဆိုတာ လုပ်ငန်းခွင် စတင်ဝင်ရောက်မည့် သူများနှင့် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ မရှိမဖြစ်တဲ့ အရည်အသွေး ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်လို့ လူတိုင်းတက်ရောက်သင့်တဲ့ သင်တန်းလေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Dr. Zayar Aung
Certified John Maxwell Trainer, Speaker and Coach CEO & Founder ( FERRY TO SUCCESS – Coaching, Training and Consulting )
Faculties : Dr. Zayar Aung|;|2233
Emotional Intelligence လို့ခေါ်တဲ့ ခံစားမှုဆိုင်ရာ အသိဥာဏ်ဆိုတာက လူ့ဘဝရဲ့ နေထိုင်မှုအနုပညာတစ်ခုပါပဲ။ မိမိခံစားချက်ပေါ်မှာ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘဝမှာလည်း ဘယ်အရာကိုမှ ထိန်းချုပ်ပြုပြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ Emotion (ခံစားချက်) ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှ မထိန်းချုပ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ကို သူများကလာပြီးထိန်းချုပ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို လက်ခံရင်း သုံးသပ်ရင်း နားလည်ရင်း ထိန်းချုပ်ရင်း Emotional Intelligence တွေကို မြင့်မားဖို့ ပြုပြင်သွားကြရအောင်။
01. What is Intelligence
02.General Factors Of Emotional Intelligence
03. Self Regulation, Motivation, Empathy And Social Skills
04. Four Branches Of EQ
05. Consequences Of Hight EQ